Xirfadaha-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Careers
Number Post Education Maya Shaqaaleysiinta
1 Maamulaha Dhoofinta Kuleejo iyo wixii ka sareeya 16
1. In si madax banaan loo horumariyo loona ilaaliyo macaamiisha ajaanibta ah. Masuul ka ah bixinta jawaabta waqtiga ku habboon ee wax ku oolka ah iyo isgaarsiinta macaamiisha weydiinta, iyo hel amarka.
2. Mas'uul ka ahaado dabagalka iyo fulinta amarada la saxiixay iyo xalinta dhibaatooyinka ka jira geedi socodka fulinta qandaraaska waqtiga. Kala soocida feylasha waqtiga markii la dhameeyo heshiiska.
1. In ka badan 5 sano oo khibrad shaqo ah, karti maamul oo xoog leh iyo karti fulineed, oo awood u leh inay si isdaba joog ah u hagaajiso waxqabadka shaqada.
2. Xirfadaha wada hadalka oo wanaagsan, taxaddar iyo shaqo damiir leh, dareen masuuliyadeed oo xoog leh, ku dhiirrasho in aad la kulanto cadaadis shaqo iyo caqabado, leh dareen hal-abuurnimo, isla markaana leh niyad kooxeed.
3. Shahaadada Bachelor-ka ee ganacsiga dibedda Ingriisiga, ganacsiga caalamiga ah ama mid laxiriira, oo leh iskuxirnaansho ganacsi oo wanaagsan iyo kuhadal xirfadaha Ingiriiska.
4. Inuu ku xeel-dheer yahay qoraalka iyo hadalka xiriirka macaamiisha ajnabiga ah, uuna awoodo inuu dibedda ugu safro si madax-bannaan. Ku shaqeyn karaa dhammaan noocyada kala duwan ee softiweerka xafiiska si xirfad leh.
Nala Soo Xiriir +
2 Dhiirrigeliyaha Suuqgeynta Kuleejo iyo wixii ka sareeya 16
1. In la hirgeliyo qorshaha suuqgeynta shirkadda, oo ay ku jiraan barnaamijka B2B, bandhig caalami ah, iwm.
2. Cusboonaysiinta, dayactirka, hawlgelinta iyo kor u qaadista websaydhka shirkadda.
3. Dhamaystir hawlaha kale ee shirkaddu u xilsaartay.